Nizera: Manavotra Aina Amin’ny Someso · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 24 Mey 2017 5:20 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Deutsch, বাংলা, Italiano, Español, عربي, English
Nisedra olana ara-tsakafo i Nizera, izay nananontanona ny antsasak'ireo vahoaka 14 tapitrisa monina ao amin'ny firenena. Niantso fanampiana maika tamin'ny sehatra iraisampirenena noho ny maha-olombelona ny Firenena Mikambana. Bilaogera iray ao amin'ny Concern US blogs, Amanda McClelland, no mitatitra momba ny fandaharanasa iray hampiasàna ny someso mba hanapariahana vola maika ho an'ireo vehivavy marefo indrindra any amin'ireo vohitra 160 ao amin'ny firenena.
Ilay famindràna vola amin'ny finday dia ampiasàna kaody iray , izay alefa amin'ny someso ho an'ireo tsirairay hahazo azy, izay azony avadika ho vola eny amin'ireo mpivarotra finday manana fifanarahana asa amin'ny tolotra fifandraisandavitra ZAIN. Ity no voalohany indrindra nampiasàna ity karazana famindràna vola amin'ny finday ity taty amin'ny firenena afrikàna miteny ny teny Frantsay:
Eto ianareo afaka mahita an-tsary ny olana ara-tsakafo tao Nizera ary ny fandalinana nataon'ny IRIN, tetikasa iray an'ny Biraon'ny Firenena Mikambana Mandrindra ny Raharaha Vonjy Aina noho ny Maha-olona, momba ny resaka “hanoanana” ary raha toa ka kere ny olana ara-tsakafo misy ao Nizera. Ary raha manontany tena ianao ny amin'ny antony tsy maha-anaty lohateny vaventy an'i Nizera na misy aza io olana io, vakio ny lahatsoratray mitondra ny lohateny hoe , “Tsy toy ny sipa manaitaitra filàna ny Repoblikan'i Nizera ka tsy ampy hatao lohateny vaventy.”